मोडलिङ गरेरै महिनामा लाखौ कमाई, रुबिना भन्छिन् ‘बिवाह भन्दा यौ-नका लागि प्रस्ताव गर्छन्’ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/मोडलिङ गरेरै महिनामा लाखौ कमाई, रुबिना भन्छिन् ‘बिवाह भन्दा यौ-नका लागि प्रस्ताव गर्छन्’
मोडलिङ गरेरै महिनामा लाखौ कमाई, रुबिना भन्छिन् ‘बिवाह भन्दा यौ-नका लागि प्रस्ताव गर्छन्’
पछिल्लो समय स्टेज तताउने नृत्य कलाकार तथा मोडल हुन्, रुविना अधिकारी । नेपालगन्ज धम्बुजीचोककी रुविनाले महजोडी लगायतका कलाकारसँग ‘नेपाल टुर’ गरिसकेकी छन् । पाँच सयभन्दा बढी स्टेज कार्यक्रम गरेकी उनले २०७० सालमा ‘बर्दिया बाँसगढी महोत्सव’मा नृत्य गरेर कला यात्रा थालेकी हुन् । कान्तिपुर एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सबाट ‘ब्याचरल इन पब्लिक हेल्थ’ अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत रुविनाको म्युजिक भिडियो मोडलिङ यात्रा २०७१ सालबाट सुरु भएको हो ।
सरिता खनाल र टंक तिमिल्सिनाको ‘तिम्रो मन चोर्नै पर्ने भो…,’बाट मोडलिङ थालेकी उनले अहिलेसम्म ६०भन्दा बढी भिडियो गरिसकेकी छन् । टिका तारामी मगर र चन्द्र शर्माको ‘बाच्छीले धान खायो,’ अनिता चलाउनेको ‘एन्ट्री मार्यो मायाले,’ जय देवकोटाको ‘रुँदो हो मन,’ हरि विष्टको ‘माइतीको देश,’ भागीरथ चलाउनेको ‘जाउँला बरी लै,’जस्ता भिडियोमा उनी देखिइसकेकी छन् । चलचित्र ‘भिलेन’को एउटा गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरिसकेकी यिनै मोडलसँग राजधानी दैनिकका डब्बु क्षेत्रीले गरेको सटकट संवाद :
– स्टेजमा चर्चित भएर पनि नायिकाको प्रस्ताव आएको छैन र ?
– त्यसो भए फिल्ममा तत्काल नआउने ?
– स्टेज कार्यक्रम किन बढी ?
– कति आउछ एउटा कार्यक्रममा ?
मेला महोत्सवमा जाँदा स्टेज कार्यक्रमबाट ३०-३५ हजार पाइन्छ । काठमाडौंमा हेरेर पैसा पाइन्छ । १० मिनेट नाचेर ३० हजार पाउनु राम्रो कमाइ हो । यो रकम लिन एउटा अफिसरले एक महिना जागिर खानुपर्छ ।
– अहिले त कोरोना भाइरसले स्टेज कार्यक्रम पनि सुक्यो होला है ?
हो नि । यसपालि पुसदेखि फागुनसम्म १७ वटा गरें । फागुन दोस्रो साताबाट कोरोना त्रास फैलिएपछि बाँकी ७ वटा कार्यक्रम रद्द भए ।
– मोडलिङ यात्रा कस्तो चल्दै छ ?
ठिकै छ । मासिक तीन-चार वटा भिडियो गरिरहेकी छु । पढाइमा पनि व्यस्त भएकाले त्योभन्दा बढीमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । फेरि स्टेज कार्यक्रम पनि भ्याउनै पर्यो ।
– प्रतिस्पर्धा कस्तो छ यो क्षेत्रमा ?
– शोषण हुन्छ भन्ने गुनासो छ त ?
– आश्वासन त दिन्छन् नि ?
त्यो त कुरै नगारौं, मसँग सम्बन्धमा बस । तिमीलाई म रातारात हिट बनाउँछु, फिल्ममा स्टार बनाउँछु भन्छन् । तर, उनीहरूले विवाह गर्छु भन्दैनन् । यौ-नसम्बन्धका लागि मात्र प्रस्ताव गर्छन् ।
– त्यस्तो बेला के जवाफ हुन्छ ?
-कसैको प्रेममा परिएको छ ?
– प्रेम त टुट्यो, अब के हुन्छ त ?